विश्वकप फुटबलः पहिलो क्वाटरफाइनल खेल्ने टिम को-को ? शुक्रबार भिडन्त - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप फुटबलः पहिलो क्वाटरफाइनल खेल्ने टिम को-को ? शुक्रबार भिडन्त
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत क्वार्टरफाइनलमा भिड्ने टोलि फ्रान्स र उरुग्वे बनेका छन्। दुवैले हिजो (शनिबार)का खेल जितेसँगै फ्रान्स र उरुग्वे क्वाटरफाइनलमा भिड्ने पहिलो टोल बनेका हुन् ।
फ्रान्सले अन्तिम १६ को पहिलो खेलमा दुई पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिनालाई ४-३ गोलले पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। फ्रान्सका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पेले २ गोल गरेका थिए।
यता उरुग्वेले युरोपियन च्याम्पियन पोर्चुगललाई २-१ गोलले पाखा लगाएर अन्तिम ८ मा फ्रान्ससँगको भेट पक्का गर्‍यो। उरुग्वेका लागि दुवै गोल इडिन्सन काभानीले गरेका थिए। अब दुई टिमबीच आगामी शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ।